SEO အတွက်ဘာကြောင့်ပါဝင်ရတာလဲ။ | Martech Zone
သောကြာနေ့, မေလ 18, 2012 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 8, 2013 Douglas Karr
သူငယ်ချင်းကောင်းများကဂရိတ်ရှာပါ ခရစ် Baggott Compendium ၏။ ငါတို့ပေမယ့် နည်းဗျူဟာများစွာကိုစိန်ခေါ် SEO ကုမ္ပဏီများသည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရရန်အသုံးပြုကြသည်၊ လူများသည်သင်၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသူများသည်နေ့တိုင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောရှာဖွေမှုများရှိနေသေးသည်။
မေးခွန်းတွေကကွဲပြားတယ်။ ဒါကြောင့်စာမျက်နှာတော်တော်များများကတော့အဲဒါကိုဖြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကုမ္ပဏီတိုင်းသည်သူတို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်လူများပြုလုပ်သောရှာဖွေမှုအမျိုးမျိုး၏အားသာချက်များကိုယူရန်မျှော်လင့်ပါကကုမ္ပဏီတိုင်းနီးပါးသည်ယနေ့ခေတ်ထုတ်ဝေသူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
SEO အတွက်ဘာကြောင့်ပါဝင်ရတာလဲ, ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မြင်ကွင်းဖို့အကြောင်းအရာသော့ချက်ဘယ်လိုစူးစမ်း။ Brafton's တွင်လည်းထပ်မံဖတ်ရှုနိုင်သည် ဆက်စပ်သော blog post.
Tags: အကြောင်းအရာစျေးကွက်အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာအီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းသော့ချက်စာလုံးတွေဝယ်ယူရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationseo
Social Radar သည် NetSuite ၏ SuiteCloud နှင့်ပေါင်းစည်းသည်
မေလ 18, 2012 မှာ 11: 11 AM
nice အချက်အလက်ဆိုင်ရာ, ဒေါက်ဂလပ်။ အကြောင်းအရာနှင့်လူမှုရေးအချက်ပြမှုများကိုတူညီသောနယ်မြေထဲတွင်ထည့်ထားမည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဂရပ်ဖစ်၏အောက်ခြေရှိ SEO ခန့်မှန်းချက်ကိုသဘောတူသည်။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်အကြောင်းအရာများ၏အရည်အသွေး၊ ရပ်ကွက်များနှင့်အခြားအရာများကိုပါစတင်ကြည့်ရှုရတော့မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့လူမှုရေးအကောင့်အရည်အသွေးအပေါ်တွင်လည်း ပို၍ အလေးထားရန်လိုအပ်သည်။ အကြောင်းအရာကိုမြှင့်တင်ရန်အမှိုက်ပုံအကောင့်များအသုံးပြုနေသည်မှာသေချာသည်။
လူမှုရေးအချက်ပြမှုများသည်အကြောင်းအရာကိုယ်နှိုက်ထက် ပို၍ အရေးကြီးလာမည်လား။
မေလ 18, 2012 မှာ 11: 20 AM
အကြောင်းအရာကောင်းကောင်းမရှိရင်ခိုင်မာတဲ့လူမှုရေးအချက်ပြတွေရနိုင်မယ်လို့ငါမထင်ဘူး။ ထိုအခါငါရှေးရှေးဤအချက်ဖို့သြဇာလူမှုရေးအကောင့်၏အလေးချိန်ဂိမ်းဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ကြထင်ပါတယ်။ သင့်မှာခိုင်မာတဲ့နောက်လိုက်များမရှိဘူးဆိုရင်သင်ဟာအမှိုက်သရိုက်အကောင့်တစ်ခုအမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မယ်။ ငါ 'လူ့' ပြproblemနာသည် SEO ၏ 'သင်္ချာ' ပြreplacedနာကိုအစားထိုးပြီးပြီဟုငါအကောင်းမြင်မိပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်ပရိုဂရမ်မာအနေဖြင့် 'လူ့' တုံ့ပြန်မှုကိုပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ
မေလ 18, 2012 မှာ 11: 30 AM
ထိုအချက်ပြမှုများသည်အလွန်အမင်းအသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် YouTube နှင့် Facebook ပေါ်တွင် Likes / Views အတွက်ပေးချေခဲ့သောနောက်ဆုံးပေါ်အမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်မှု / အမြင်များကို ဦး တည်စေသော webmaster များ / seo ရှေးရှေးများမှကျွန်ုပ်သည်ကြားခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံးမှာတော့အမှိုက်အကောင့်တွေကအမှန်တကယ်အကောင့်ဆီသို့ ဦး တည်သွားတယ်။
မေလ 18, 2012 မှာ 2: 29 pm တွင်
သူတို့ဟာလူတွေထင်သလိုသူတို့တွေဟာအလွန်အမင်းအသုံးချကစားတာကိုမယုံဘူး။ ငါ YouTube ၌ကြည့်ရှုရန် ၅၀၀၀ ကြည့်။ နှစ်သက်နိုင်သည်။ သို့သော် (က) ထို YouTube သုံးစွဲသူများသည်သြဇာညောင်းပါသလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ခ) ထိုအမြင်များနှင့်ဆက်နွယ်သောဆိုဒ်များစွာတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
Evan Jacobs ဖြစ်သည်
4:2012 pm မှာဇွန် 10, 47
သင်၏အကဲဖြတ်မှုကိုလုံး ၀ သဘောတူပါ။ အကြောင်းအရာကြီး၏တန်ဖိုးကိုထင်မြင်ချက်ခေါင်းဆောင်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးစာဖတ်သူများကိုပညာပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အကြောင်းအရာသည်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ပဲ့တင်ထပ်သည့်အခါ၎င်းတို့သည် ၄ ​​င်းတို့ကိုလူမှုရေးအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်မျှဝေပြီးမြှောက်ကိန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုစတင်သည်။
စက်တင်ဘာ 20, 2015 မှာ 2: 51 AM
ငါမင်းဒေါက်ဂလပ်ကိုသဘောတူတယ် လူမှုရေးအချက်ပြမှု၏အမှန်တကယ်ပုံစံများကိုသရုပ်ဖော်သည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကအသုံးချခြင်း (သို့မဟုတ်အစီအစဉ်တင်ထားသော) အကြိုက်များ၊ အမြင်များ၊ ကြည့်ရှုခြင်းစသည်တို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
မေလ 18, 2012 မှာ 11: 41 AM
14:2012 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 33
သွားကြည့်ရှုသူ ၅၀၀၀ နှင့် YouTube တွင်ကြည့်ရှုရန်နှစ်သက်ပါ။ သို့သော် (က) ထို YouTube သုံးစွဲသူများမှာ
သြဇာ? မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ခ) တစ်လျှောက်လုံးပတ်ဝန်းကျင် buzz ရှိပါသလား